ရင့်နင့်ဖွယ် ဇာတ်လမ်းလေး(စိတ်ခိုင်မှ ဖတ်ကြည့်ကြပါနော်) – Alanzayar
မိုးက မသည်းပေမဲ့ တစ်စိမ့်စိမ့် ရွာနေသည် ။ဘယ်လို ဖြစ်မှန်းမသိ မှော်ထဲ သွားရမှာ စိတ်လေးနေမိသည် ။
အိပ်ယာထဲမှ ကိုကြီးကိုလည်း သနားမိသည် ။ ကိုကြီးက ကျွန်တော်တို့ မောင်နှမတွေကို ငဲ့ကာ ကျောင်းထွက်ပြီးး မှော်ထဲ အရင် ရောက်နှင့်သူ ။ ခုတော့ ဆေးသမား ဖြစ်နေရှာပြီလေ ။
covide ကပ်ရောဂါကြောင့် အိမ်မှာလဲ ကြပ်တည်း နေတာ ကျွန်တော် သိသည် ။ ခုရက်ပိုင်းး ကျောက်ကောင်းတွေက ရနေတော့ လက်လွတ် မခံချင် ။ ကော်ဖီမစ် တစ်ခွက် သောက်ပြီးး သွားမည်ဟု ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။
အမေက နေကောင်းကြောင်းးး သားတို့ ညီအကို နှစ်ယောက် အမြန်ပြန်လာဖို့ အကြောင်းနဲ့ ဗေဒင် မေးကြည့်တာ …သား ဇာတာ မကောင်းး ကြောင်းး ရွာမှာ မရှိ… ရှိတာ လုပ်စားမယ့် အကြောင်း တတွတ်တွတ်မှာသည်။
အမေနဲ့ ဆက်ပြောနိုင်စွမ်း မရှိတာနဲ့ ညီလေးနဲ့ ညီမလေး ကို ဖုန်းပေးခိုင်းလိုက်သည် ။ ညီလေးက ဂိမ်းကစားဖို့ ဖုန်းဝယ်ပေးဖို့နှင့် ညီမလေးက စက်ဘီး ပူစာသည် ။
မောနင်းးပါ ချစ် ။ အကို မှော်ထဲ သွားတော့မယ်နော် ။ကြည့်စမ်းး ကောင်မလေးး ခုထိ မနိုးသေးဘူးး အိပ်ပုတ် ကျွန်တော်က ကျွန်တော့်ကောင်မလေးကို အရမ်းချစ်တာ ။ သူကလဲ ကျွန်တော့်ကို ချစ်တယ် ။
” သူငယ်ချင်းရေ သွားရအောင်”သူငယ်ချင်းအား အော်ခေါ်ရင်းး သူငယ်ချင်းး နှစ်ယောက် အတူ ထွက်ခဲ့ သည် ။မှော်ထဲ ရောက်တော့ ကျွန်တော်တို့ နောက်ကျ နေပြီ ။
ဒီနေရာ က ကျောက်လဲရ ကျောက်ကောင်းလဲ ထွက်ဆိုတော့ အောက်ထဲမှာတင် လူ နှစ်ရာ ကျော်လောက် ရောက်နှင့်နေပြီ ။မိုးကလဲ ရွာကောင်းတုန်းး ။ သူငယ်ချင်းး နှစ်ယောက် အိမ်မက်ကိုယ်စီဖြင့် တွင်းထဲသို့ ဆင်းးရှာတုန်းး
” ဟေးးး အားဒီ …ဒီနေ့ ကျောက်တွေ အများကြီးး ရတယ်ဟ ” လို့ သူငယ်ချင်းကို အော်ပြောမိသည်။ သူငယ်ချင်းကလဲ သူလဲ ရကြောင်း လက်မထောင်ပြသည် ။ မှော်ထဲက လူ နှစ်ရာကျော် အကုန်လုံးး အပြုံးလေးတွေ ကိုယ်စီဖြင့် ။ သူငယ်ချင်း အားဒီက လှမ်းအော်သေးသည် ။ ” ငါတို့ လော်ပန်းဖြစ်ပြီကွ” လို့ကျွန်တော်လဲ ဒါလေးက အမေ့တွက် ကျောက်စိမ်းလက်ကောက်လေးး ၊
ဒါလေးက ချစ်သူတွက် လည်ဆွဲသီးလေး ဆိုပြီးး သက်သက်ဖယ်ထားပြီး အရမ်းပျော်နေမိပြီ ။ရသင့်သလောက်လဲ ရပြီးပီမို့ သူငယ်ချင်းအားး ခေါ်ကာ ပြန်ခဲ့ကြပြီ ။ မိုးက မသည်းပေမယ့် တစ်စိမ့်စိမ့် ကျတုန်းးး ရှေ့မှာ ငိုသံ သဲ့သဲ့ ကြားနေရသည်။ အနားနီးလာတော့ ငိုသံကို ပီပြင်စွာကြားလာရသည် ။ ငိုသံက…. ” ကိုကြီးး ငိုသံ ၊ ကိုကြီးး ငိုသံ “ကျွန်တော် ကိုကြီးအား စိတ်ပူစွာဖြင့် အပြေးအလွှား သွားမိ၏
ကိုကြီးသည် ရုပ်အလောင်းး တစ်ခုအားး ဖတ်ငိုနေသည် ။ ဘေးမှာ သူငယ်ချင်းး အားဒီ ရဲ့ ရုပ်အလောင်းး ။ သေသေချာချာ ကြည့်လိုက်တော့ ….ကိုကြီး ဖတ်ထားသည်မှာ ကျွန်တော့်ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ် ဖြစ်နေသည် ။” အာ! ဘာတွေလဲ ဘာတွေလဲ”သူငယ်ချင်း အားဒီက ကျွန်တော့ လက်ကလေး ဆုတ်ကာ လာပြောသည် ။
” ငါတို့ ပါသွားပြီ” တဲ့ ။ကျွန်တော် အသံမထွက်နိုင်အောင်ပင် အလွန်ဝမ်းနည်းး သွားမိ၏ ၊ ဒူးထောက်ကာ ရှိုက်ကြီးး တငင်ငင် ငိုနေမိ သည် ။ ကျွန်တော့်ရဲ့ လောပန်းလောင်း အိမ်မက်တွေ ဘယ်ရောက်ကုန်ပြီလဲ ။
ဒါဆို …ဒီကျောက်စိမ်းတွေက ငါတို့ အရိုးတွေပေါ့ ။ ငါတို့ အရိုးတွေပေါ့ ။ကျွန်တော် မျက်ရည်တွေ ဖြိုင်ဖြိုင်ကျကာ ကျောက်စိမ်းတုန်းတွေကို ဦးတည်ရာမဲ့ လွင့်ပစ်နေမိသည် ။ ”
ဒါ ကျောက်စိမ်းတွေ မဟုတ်ဘူးး အရိုးတွေ အရိုးး တွေ” ဟု ပါးစပ်ကလဲ ပြောမိသေးသည် ။လွင့်ပစ်သည့် ကျောက်စိမ်းတုန်းတွေထဲမှာတော့ အမေတွက် လက်ကောက် လုပ်ပေးရန်နှင့် ချစ်သူတွက် လည်ဆွဲသီးလေး မပါ ။
ကိုကြီးရယ်….သေမင်းနဲ့ နီးမှန်း သိပေမယ့်အိမ်မက်နဲ့လဲ နီးတာမို့ညီလေးး ဒီလမ်းကို ရွေးခြယ်မိတာပါ။ စွန့်ပစ် မြေဇာပုံ ဆိုတာမပြို လဲ အောင် ထိန်းထားရတဲ့အသက်ငင်နေတဲ့ တောင် တစ်တောင် ဆိုတာညီလေးး သိပါတယ် ။
ရေမဆေး ကျောက်တစ်တုံးဟာအရိုးယောင် ဆောင်ထားတဲ့အသားတုံးး တစ်တုံးး ဖြစ်နိုင်တယ် ဆိုတဲ့ရေမဆေး သမားတွေရဲ့ မျှော်လင့်ချက်နဲ့ညီလေးး လာခဲ့တာပါ ။
အမှိုက်ပုံပေါ်က ခွေးတွေ ဟာစားကြွင်းစားကျန် ရှာရသလို မြေဇာပုံ ပေါ်က ညီလေးတို့ ဘဝဟာလည်းကျောက်ကြွင်းကျောက်ကျန် ရှာရမှာပဲ အကို။သေမင်းနဲ့ နီးပေမယ့်အိမ်မက်နဲ့လဲ နီးတာမို့ညီလေးး ဒီလမ်းကိုရွေးခဲ့ မိတာပါ ကိုကြီးရယ် ။ ကိုကြီးးဘေးမှာ ဒူးထောက်ပြီးး ကျွန်တော် ပြောနေမိသည် ။
ဒါပေမယ့် …..ကျွန်တော်ပြောတာတွေ ကိုကြီးမကြား နိုင်တော့ ပါ ။
ကျွန်တော့် ရုပ်အလောင်း ဘေးမှ အန်တီကြီးက သူ့သား အလောင်းအားး ဖွေ့ဖတ်ကာ” သားးး အဖေကောင်း အမေကောင်းး ရှာနော်”” သားးး အဖေကောင်း အမေကောင်း ရှာနော်”” နောင်ဘဝ အမေတို့ဆီပြန်မလာနဲ့တော့ နော်”တဲ့။ကျွန်တော် အလွန် ဝမ်းနည်းသွားမိသည်။ အမေ့ကိုလဲ သတိရမိ သွားသည်။
အမေ…သား သတင်းကြားရင်အမေ မငိုနဲ့ နော် ။လယ်တွေသိမ်းလို့ ဆန္ဒ ပြရင်းးထောင်ထဲ ရောက်နေတဲ့ အဖေ့ကိုလဲ ပြောပေးပါ ။သား သတိရပါတယ်လို့ ။
သားကို ဒီအရွယ်ထိ ပြုစုပြိုးထောင်ပေးတဲ့အဖေ အမေ တို့ ကျေးဇူးကိုမမေ့ပါဘူးးးသား ပြန်လာခဲ့မယ်နော် အမေ ။သားကို မနှင်ပါနဲ့ နော် ။နော် အမေ. နော် ။သားပြောတာတွေ အမေကြား နိုင်ပါစေနော် ။
ကျွန်တော် ဘယ်လောက်ကြာကြာ ငိုနေမိမှန်းး မသိ ။ သူငယ်ချင်းက ပခုံးလေး လာပုတ်မှ သတိရမိသည် ။အခုတော့ ….လွမ်းရေးထက် ဝမ်းရေးခတ်မို့ ချစ်သူနဲ့ လဲ ဘဝခြားခဲ့ပြီ ။ တောင်တန်းတွေလည်း ပျောက်ခဲ့ပြီ ဥရုချောင်းကြီးလည်းနှောက်ခဲ့ပြီ၊စမ်းချောင်းတွေလည်းပျောက်ကုန်ပြီလေ။
သေဘေးကို ခြေဖျားမှာထား ရေမဆေးရှာစားနေရတဲ့ ဘဝတွေ….ခဗျားတို့ကတော့ရေခြားမြေခြားအနေခြားတဲ့ကောင်တွေနဲ့ဝေစားနေကြတာ၊လိုခြင်တာဘဲသိပြီး..ပေးရကောင်းမှန်းမသိတဲ့လူတစ်စုကြောင့် တောင်တန်းတွေလည်း ရေကန်ဖြစ်ကုန်ပါပီလေ၊
ဘယ်အချိန်ထိ တွေဝေနေမိမှန်း မသိ ။ သူငယ်ချင်းက ပုံးခုံးလေး လာဖတ်ပြီး ပြောမှ သတိရမိသည် ။ ငါ့တို့တွေ ကိုယ့်အရိုး ကိုယ် ပြန်တူးနေတဲ့ဘဝ ကြီးကနေ လွတ်ခဲ့တာပေါ့ ကွာ တဲ့ ။ ကျွန်တော် ရှိုက်သံ တစ်ချက် ထွက် လာမိသည် ။
” ဟုတ်တယ် ငါ ကို့အရိုး ကိုယ်ပြန်တူးတဲ့ ဘဝက လွတ်ခဲ့တာ “ကိုယ့်အရိုးး ကိုယ်ပြန်တူးးတဲ့ ဘဝက လွတ်ခဲ့တာဟေ့လို့ …ဖားကန့်တခွင်လုံးး ကြားအောင် အော်လိုက်မိသည် ။
Previous Article စစ်ကောင်စီက ဖခင်ဖြစ်သူအား ဖမ်းမမိသဖြင့် ၁၀ နှစ်အရွယ် သားနှင့်ဇနီးကို…see more
Next Article စစ်ကိုင်းဘက် အခြေအနေက မြင်ရတဲ့အတိုင်းအရမ်းဆိုးနေပြီ တစ်ချို့လူတွေ ဟီးဟီးဟားဟားတွေ လုပ်လို့မဝသေးတာလားလို့ မေးလာတဲ့ ကိုပေါက်